Nofy momba ny dikany amin'ny fifandraisana - Lahatsoratra
ny fomba anaovana ny privé anao amin'ny iphone
Ahoana ny fomba hamerenana ny apps amin'ny iOS 10
manjavozavo ny fakantsaroko finday
Nofy momba ny dikany amin'ny fifandraisana
Nofy momba ny dikany amin'ny fifandraisana.
Efa nanonofy peratra ve ianao? Huh? Ahoana? , Mety hamaly ny mpamaky, gaga amin'ny fanontaniana toy izany, toy izany.
Ny peratra dia mihoatra ny firavaka fotsiny: Ireo dia famantarana ny toe-piainana ara-tsosialy, manana ny lanjany izy ireo ary, raha hino izay lazain'ny finoana taloha dia manana heviny miafina izy ireo, izay manome famantarana momba izay mitranga ao amintsika tsy mahatsiaro tena .
Ny dikan'ny nofinofy momba ny peratra
Toy ny dikany amin'ny tena fiainana, ny manonofy amin'ny peratra dia midika fanoloran-tena sy fahatokiana. Izany dia afaka miaraka aminao sy ny fitsipikao na mifandraika amin'ilay olona hafa. Fa ity karazana nofinofy ity dia mety hidika koa hoe zava-baovao na vaovao NAMANA ! Ka izay hanampy amin'ny famaritana ny làlan-kaleha amin'ny fotoana iainanao dia ny toetran'ny nofinao.
Ohatra, ny karazana peratra, ny fitaovana, na feno na tapaka ... Ka, mba hahatakarana tsara ny mialoha izany nofinofy izany dia mitondra amin'ny hoavintsika, hahafantarantsika kely momba ny tsirairay amin'ireo fiovana ireo.
Ahoana no ahafahanao maka sary an-tsaina, manonofy peratra volamena dia misy ifandraisany amin'ny fifamofoana na fampanantenana ary midika izany fa ho avy ny fampakaram-bady. Mety ho anao na olona akaiky anao io.
Fa jereo tsara ny nipoiran'io peratra io tamin'ny nofinao. Raha nomen'izy ireo anao izany dia mety hidika ho fampanantenanao tetikasa vaovao amin'ny fiainanao. Fa raha omenao olona ilay peratra dia midika izany fa hanomboka finamanana lehibe ianao.
Ity nofy ity dia mety misy dikany telo. Ny voalohany dia ho an'izay tafiditra amin'ny orinasa vaovao na mitady fiakarana karama. Raha izany no izy, dia mailo ianao amin'ny fanatsarana ny fiainanao ara-bola amin'ny ho avy.
Ny dikany faharoa dia mifamatotra amin'ny fifandraisana matotra ary maneho ny firaisankina sy ny fitoniana ara-pihetseham-po eo amin'ny mpivady.
Ary farany, ny dikany fahatelo amin'ity karazana nofy ity dia fampitandremana mba hihainoanao bebe kokoa ny feon'ny fikasanao.
Ny manonofy peratra diamondra dia fambara tsara! Ny diamondra dia vato mahery sy mateza tsy manam-paharoa famirapiratana sy hatsaran-tarehy. Ny manonofy ny peratra an'ity vato ity dia midika fa eo amin'ny làlana tsara ny fifandraisanareo dia hambinina sy maharitra izany. Saingy, raha tsy ao anaty fifandraisana nofinofy ianao dia midika fahatokiana amin'ny olona akaiky anao izany.
Toy ny peratra diamondra, ny manonofy peratra fifamofoana dia midika fa tsy fivadihana lalina eo amin'ny olona roa, ankoatry ny firaisana ara-batana sy ara-tsaina. Ny manonofy an'io peratra io dia midika hoe mijanona ho mafy orina sy marina ny fifandraisanareo.
Na izany aza, raha misy sipa nofinofisinao, dia mety hidika ho fiovana eo amin'ny fiainanao, fisehoan-javatra tsy ampoizina na lova izany.
Ny nofinofy amin'ny peratra mariazy dia midika firaisana mandrakizay eo amin'ny olona roa, amin'ny fomba toy izany ny fifanarahana dia tandindon'ny fatorana fitiavana tsy manam-petra.
Raha ny hoe manonofy amin'ny peratra volamena dia midika hoe fanoloran-tena, efa azontsika an-tsaina ny dikan'ny hoe manonofy peratra vaky… Marina izany, ny peratra tapaka, very na nangalarina tao anaty nofy dia fampandrenesana ho an'ny fiarahanareo. Noho izany dia mety hidika ho fiafaran'ny tsy fivadihana, fivadihana na fanimbana ny fifandraisana.
Ankehitriny, raha te-hahita peratra very ny nofy, dia tsara ny famantarana! Ho tafaverina ny fifamatorana misy eo aminao sy ny vadinao!
Manonofy peratra amin'ny rantsan-tanan'olona hafa
Nandeha tamim-pahagagana ny zava-drehetra tao amin'ny tanin'i Morpheus rehefa misy miseho amin'ny peratra amin'ny rantsan-tànany. Azo antoka fa hafatra avy amin'ny tontolon'ny nofy izany ary, azafady, tsy izy no tsara indrindra.
Raha ny hevitr'ireo nofy nofinofy dia mety tsy zavatra tsara izany olona vao nipoitra teo amin'ny fiainanao izany ary navela ianao tany aoriana.
Ny nofinofisinao hampitandrina anao dia ny fananany izay rehetra mijoro eo anelanelanao sy ny vadinao ary miteraka fialonana, tsy fahazoana aina ary mampihetsiketsika ny fifandraisana.
Na hoe ho lasibatry ny fampielezana smear natombok'ity namana vaovao ity ianao. Sanatria izany!
Tsy misy sipa tazana?
Mety ho hafahafa ny nanofisanao a peratra fifamofoana satria tsy mampiaraka olon-kafa matotra ianao izao. Tsy dia manam-potoana hihaonana amin'ny kandidà ianao.
Ny peratra dia mariky ny tsy fivadihana. Azonao atao ny mamintina avy amin'ny nofy fa ny fahatsapana fa feno dia mila fanoloran-tena avy amin'ny olona iray ianao. Mety ho namana, mpiara-miasa na olon-kafa izany. Mila mahatsiaro ho voaro ianao ary izany no antony anaovanao izany nofy izany.
Ramatoa manantena miandry
Ianao manonofinofy ny manolo-tena amin'ny olona tianao hananganana fiainana. Ity no antony mahazatra indrindra ao ambadiky ny nofinofy fifanarahana. Mahatsapa ianao fa misy tolo-kevitra atsy ho atsy ary vonona ny handray ny dingana! Tsy mahagaga raha manonofy hizara ny fitiavanao ianao amin'ny fanoloranao tena amin'ny olona iray.
Ny ankamaroantsika dia voarindra hanomanana izany hitranga amin'ny fotoana iray amin'ny fiainantsika. Ny fianakaviana nokleary dia nivoatra tao anatin'ny dimampolo taona lasa ary nitarina ny famaritana. Na izany aza, ny natioran'olombelona dia mirona hitaona antsika hatrany amin'ny endrika fifandraisana misy fanoloran-tena.
Manonofy fa naverinao ny peratra fifamofoanao
Mitebiteby kely fotsiny
Mahatsiaro manahy momba ny nofinao ve ianao satria nanonofy fa namerina ny peratra anao? Mampiseho ny peratra fifamofoanao ianao ary mampiseho ny namanao. Hitanao manonofinofy momba ny fiainanao aorian'ny hijerena ny peratrao. Inona no mety tsy mety? Miaraka amin'ny fahasambarana sy fiandrasana rehetra tonga miaraka amin'ny vady ampakarina, dia mety hanana nofinofy mampivadi-po ianao. Mazava ho azy, tsy mahatsiaro miverina mamerina ny peratrao ianao! Miadia lolo sy hozatra alohan'ny fampakaram-bady. Ara-dalàna izany ary milamina tsara ianao.
Peratra fifanarahana nofinofy, midika izany fa very ny peratrao
Matahotra ny ho very zavatra sarobidy tokoa.
Tao anatin'ny nofinofinao dia tena very ny peratra fifamofoanao! Nanomboka teo dia nandinika tamim-pitaintainanana ny tanany havia isaky ny 30 segondra izy mba hahazoana antoka fa mbola eo amin'ny rantsan-tanany io. Ny nofy dia andro lasa izay, fa ny tebiteby tsapanao dia nijanona taminao.
Ity nofy ity dia tsy tokony ho fampitandremana mahasoa fotsiny amin'ny fampitsaharana ny famelana azy ao anaty rano. Hitanareo ny sitcoms izay very ny peratra fifamofoana ary avy eo ny hanoanana. Rehefa peratrao io dia tsy mahafinaritra. Tandremo sao avelanao any aoriana.
Famoahana be loatra ny saina alohan'ny fampakaram-bady
Angamba ny nofy dia vokatry ny fanahiana alohan'ny fanambadiana. Manomana mariazy ianao ary manilika ireo antsipiriany kely rehetra amin'ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra. Betsaka ny zavatra tokony tadidio: kojakoja fitafiana fampakaram-bady, fisafidianana akanjo ampakarina, fanandramana mofomamy, toerana fandraisana sy fanandramana sakafo ary maro hafa. Ity fotoana be atao alohan'ny fampakaram-bady ity dia mampatahotra ny ankamaroan'ny mpanambady ny manadino zavatra… toy ny toerana nilaozan'izy ireo ny peratra.
Mihoatra ny dikan'ny nofinofy fanaovana firaisana
Psychology Androany manana hevitra vitsivitsy momba izay azon'ny nofinofy atao ho antsika:
Ny teôria iray dia mamaritra ny nofy ho toy ny fanimbana ny ati-dohantsika. Manala izay tsy ilaintsika isika ary mifantoka amin'ny zavatra tena ilaina.
Mahazo fahendrena isika rehefa manasokajy ireo mpitadidy ny andro ho mpiambina ary tsy tokony hotadidintsika izany.
Ny nofy dia toerana azo antoka handinihana ny fihetsem-po.
Aza avela hanelingelina anao ny nofinofy mpanambady!
Aza eritreretina loatra ny nofinao ka avelao hitebiteby ianao. Diniho izay mety ho dikan'izany ary tohizo amin'ny fahatokisan-tena mba hahafahanao mifantoka amin'ny fampitomboana ny fitiavanao sy ny fiainanao! Mahereza sy mahagaga, andro aman'alina, ary mankafy ny tantaram-pitiavanao!
The Diet miaramila: torolàlana ho an'ny vao manomboka (miaraka amin'ny…
Afaka Mitoe-jaza ve ianao amin'ny aretin'ny bakteria?
Inona no dikan'ny isa 5 eo amin'ny lafiny ara-panahy? Nomery anjely
Ahoana ny fametrahana fakan-tsarimihetsika ho an'ny fifandraisana amin'ny iPhone: The Easy Guide!
Tandindona amin'ny nofy kristiana: ny fandikana ny nofy ao amin'ny Baiboly sy ny tandindon'ny finoana
Hevitra ratsy ve ny fanidiana Apps iPhone? Tsia, ary izao no antony.
Ny App Verizon -ko tsy mandeha amin'ny iPhone? Ity ny The Real Fix!
HASIN'NY FANAHY ATO AMIN'NY FITSABOAN-TAFITRA
Ny zava-misy momba ny Andes Condor
Ahoana ny fampiasana ny findaiko iPhone: The Simple Guide!
Hevitry ny Baiboly amin'ny vola anaty nofy
Feo mikorontana ny mpandahateny iPhone! Ity ny The Fix.